အနက်ရောင် အိပ်မက်တစ်ခု၏ ၀ိဥာဉ်များ...: ကျွန်တော်နှင့် နံနက်စာ
Posted by Pyiet Oo Aung at 8:37 PM
ဒါဆိုရင် သိုးလေးဆီမှာ ပြင်းပြတဲ့ ဆန္ဒ နဲ့ ချက်လုပ်ထားတဲ့ အရည်တစ်ခွက် လာယူပါလား။ :)
blog မလုပ်တော့ဘူး ဆိုလို့ မရောက်ဖြစ်တာ။
ကိုဦး ရေ ဒီ post လေးကိုိ လည်း ငါ သိပ် ကြိုက် လို့ comment ပေးခဲ့ တယ်'
idea လေး က အရမ်း ကိုိ ကောင်း ပါတယ်။။
Keep it up ! Cheerzzzzzzzzz
Good idea and very Creative! Well done bro! Keep it up!
BTW, how about it, how do you felt on it, poem or simple article?
I think it'sabeautiful poem.
Anyway , thank you for this poem.
idea က အရမ်း ကိုိ ကောင်း တယ်၊၊ဘဝ ဆိုတာပါးပါးလှီးထားမှကောင်းတာ အတုံးလိုက်အတစ်လိုက်ဆို လူကိုဒုက်ခ ပေးတတ်တယ် တဲ့လား၊၊မိုက်တယ် ရိုက်ချက်ကတော့ပြင်းတယ်၊၊
keep up bro.. you have great thinking..
နောင်တနဲနဲ လျော့ထည့်ထားတဲ့ ဖြစ်ချင်တာတစ်ခွက်တော့ သောက်ချင်တယ်။ အိပ်မက်ကတော့ ပျောက်ကွယ်သွားတက်တဲ့အရာ ဆိုတော့ မစားချင်တော့ပါဘူး။
ကျနော် စားချင်တာက ပဲပြုတ်ဆီစမ်းလေးနဲ့ထမင်းပူပူလေးဗျ အခုတော့ ကျနော့် မနက်စာတိုင်းက အလိုမကျမှုတွေနဲ့ငမ်စပ်နေတဲ့ ပုပ်အက်အက် ငပိရည်တစ်ပွဲ တော်သေးတာပေါ့ သည်းခံခြင်း သခွားသီး တို့ စရာလေး ပါလို့း) ။
အစ်မလည်း “ဖြစ်ချင်တာ”ပဲ အမြဲ သောက်နေချင်တာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အတိတ်မှာ သောက်ခဲ့ဖူးတဲ့ “ဖြစ်ချင်တာ”တွေမှာ “နောင်တ”တွေ လေးလေးပင်ပင် ပါနေတာချည်းပဲဆိုတော့... အခုလောလောဆယ် “ဖြစ်ချင်တာ”ကို ခဏဖြတ်ထားရတယ် မောင်လေးရေ။ သိပ်ကိုကောင်းတဲ့ ပို့စ်ပါပဲ။
ဒီ ပို့စ် လေးကို ဒီနေ့မှ ဖတ်ဖြစ်တာပါ
ဘ၀ စီမံ ခန့်ခွဲမှု အတွက် အကိုက အရမ်းတွေးထားတယ်နော်
တခါတလေ ဖြစ်ချင်တာကို လုပ်တာ
a yan mite tal..ayan like tal..
breakfast lay ka aa yan good tal nor.